Daafaca Atletico Ee Filipe Luis Oo Ka Hadlay Hadii Antoine Griezmann Uu Ka Tagayo Kooxdiisa %
Sida laga soo xigtay xidiga ay isku kooxda yihiin ee Filipe Luis, ciyaaryahan Antoine Griezmann, wuxuu Atletico Madrid, uu sii joogi doonaa sanado badan, wuxuuna yahay mid wali aanan go’aamin mustaqbalkiisa.
Griezmann, oo dhaliyay goolkiisii 100 ee Atletico, kulankii ay soo xasuuqeen Sevilla, markaas wiilkaan reer France dhaliyay Saddex gool, ayaa waxaa si xoogan loola xiriirinayaa inuu Barcelona, udhaqaaqayo dhamaadka xili ciyaareedkan.
“Waa ciyaaryahan, kaasoo aad ugu dheer saaxiibadiisa ay isku kooxda yihiin, waxaana ku kalsoonahay in uusan wali qaadan go’aankii uu ku dhaqaaqi lahaa,” ayuu usheegay Majalada Marca, ee wadanka Spain ciyaaryahan Luis.
“Dhamaan kooxda Atletico Madrid, ciyaartoydeeda waa kuwa ku farax-san inuu isaga lasii joogo halkaan,” ayuu hadalkiisa ku daray
“Wuxuu ku farax-san yahay kooxda iyo waliba Magaalada, marka waxaan arkayaa inuu nala sii joogi doono sanado badan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Daafacii hore ee Chelsea, kaasoo dambeedka bidix ka dheela.
Sikastaba, Atletico Madrid, ayaa waxay hada uga jirtaa shaxda kala horeynta ee La Liga, kaalinta Labaad waxayna leedahay 65 dhibcood, iyadoona ka dambeysa Barcelona oo koowaad Jiifta lehna 69 Buundo.
Antoine GriezmannAtletico Madrid vs BarcelonaFilipe LuísLa Liga